Abdiweli Garyare oo tacsiyeeyey nabadoonada lagu dilay Cabudwaaq, kana digay inay wax kale dhacaan. – Kismaayo24 News Agency
Abdiweli Garyare oo tacsiyeeyey nabadoonada lagu dilay Cabudwaaq, kana digay inay wax kale dhacaan.
by admin 8th September 2016 062
Dhagayso: Nabadoon Muuse Geele oo lagu dhaawacay Caabudwaaq iyo Xaaladda oo kacsan.
WARBIXIN: Akhriso K24 Oo Idin Soo Koobeysa Taarikhda Musharax RW CCC Sharmarke, Iyadoona………………..
Madaxweyne Donald Trump Oo Ku Goodiyey Inuu Burburin Doono Iiraan.
SAWIRO: Madaxweyne Farmaajo oo iskaga Soohayaamey Magaalada.
Daawo:- Dayaca haysta Iskuulka Bardacad Gaalkcyo